Rin'i Chidimbu chimwe nechimwe kududzirwa kwechimedu chechisiko. Icho Chisikwa chinova chirevo chekupa hupenyu kune zvishongo, kutamba nemagadzirirwo mwenje nemimvuri. Chinangwa ndechekupa chishongedzo chemhando dzakadudzirwa sezvo hunhu hwaizogadzira ivo nekunzwa kwavo uye hunhu. Zvimedu zvese zvakagadzirwa nemaoko zvakapedzeredzwa kusimudzira maumbirwo uye hunyanzvi hwejeko.Mhando yacho yakachena kuti isvike pairi chirimwa hupenyu chinhu. Mhedzisiro yacho inopa chidimbu zvese zvakasarudzika uye zvisingagumi zvakabatana zvakanyanya nechisikirwo.
Womenswear Muunganidzi Daria Zhiliaeva's graduate muunganidzwa ndewechikadzi uye masculinity, simba uye kushupika. Iko kuunganidzira kurudziro kunobva kune yekare ngano kubva kuRussia zvinyorwa. Iyo Hessess yeGomo reCopper isosi yemashiripiti evashandi vevhu kubva kune yekare Russian firimu. Muunganidzwa uyu unogona kuona wanano yakanaka yemitsetse yakatwasuka, seyakafuridzirwa neyunifomu yemuminisita, uye hunyoro huwandu hwezvipfeko zvemunyika yeRussia. Chikwata-nhengo: Daria Zhiliaeva (mugadziri), Anastasiia Zhiliaeva (mubatsiri wemugadziri), Ekaterina Anzylova (mufananidzo)
Svondo 16 Ndira 2022
Jasi Rinogona Kushandurwa
Mugovera 15 Ndira 2022
Jasi Rinogona Kushandurwa Iyo jasi inogona kuve 7-in-1 inofuridzirwa nevakadzi vebasa rakasarudzika vanosarudza yakasarudzika, yechisikigo uye inoshanda zuva nezuva wardrobe. Mariri yakare asi zvekare yakatsvedza, yakashongedzwa ruoko, Scandinavia Rya Rug nguo inoshandurwa nenzira yazvino uno inoguma nenguo dzakapfeka mvere dzemakushe dzakafanana nemachira maererano nemaitiro avo. Musiyano uri mune zvakadzama uye mhuka uye nharaunda hushamwari. Mumakore ose Eco Furs yakaedzwa mumamiriro ekunze eEurope nguva yechando yakabatsira mukukudziridza hunhu hwejasi iri uye zvimwe zvidimbu zvichangobva kuitika mukukwana.
Brooch Rin'i Zvishongo Womenswear Muunganidzi Chikwama, Bag Remanheru Ndoimwe Jasi Rinogona Kushandurwa